होसियार भुलेर पनि सेवन नगर्नुस यी ५ ब्यक्तिले लसुन नत्र ज्यान पनि जान सक्छ…. – Waikhari
गृहपृष्ठ जीवन शैली होसियार भुलेर पनि सेवन नगर्नुस यी ५ ब्यक्तिले लसुन नत्र ज्यान पनि जान सक्छ….
होसियार भुलेर पनि सेवन नगर्नुस यी ५ ब्यक्तिले लसुन नत्र ज्यान पनि जान सक्छ….
झाडापखालाले ग्रसित भएको व्यक्तिले लसुनको सेवन गरेमा, यसको पीरो स्वादले आन्द्रालाई नकारात्मक असर पुर्याउँदछ, जसको कारण आन्द्रामा घाउ हुन जान्छ र यस्तो अवस्थालाई ‘इन्टेस्टाइनल म्युकोसल हाइपरिमिया’ ९क्ष्लतभकतष्लब िःगअयकब िज्थउभचझष्ब० भनिन्छ। यस्तो अवस्था हुँदा, दिशा गर्दा कडा पेट दुख्ने, दिशामा रगत देखिने, रिङ्गटा लाग्ने र बान्ता हुने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्दछन्। त्यसैले, झाडापखाला लाग्दा लसुनको सेवन नगर्नुहोस्।